Wararka - Waa maxay sida mashiinka baakadaha finankaaga?
Sidee buu u eg yahay mashiinka baakadaha finankaaga?
Finishku waa nooc ka mid ah caag si buuxda u hufan.Marka loo eego habka nuugista caagga ah, xaashida balaastigga ah ee hufan ayaa loo sameeyaa qaab gaar ah oo soo jiidasho leh, kaas oo lagu daboolay dusha sare ee alaabta, kaas oo loo isticmaali karo dayactirka iyo qurxinta alaabta.Sidoo kale waxaa loo yaqaanaa mashiinka baakadaha finanka.Daboolka bamka vacuum.
Sidee loo soo saari karaa khariidad saxmad ah oo warqad ah?
Kaarka xaashida ah ee shaabadeeyey baakadaha tijaabada baakadaha.
Mashiinka baakadaha bilister-ka ee tooska ah ee wareega afar-goobo.
Bandhigga moodeelka afarta-joog.
Mabda'a aasaasiga ah ee doorashada dhalaalidda kulaylka inta jeer ee sarreeya:
Kuleyli qalabka shaqada ee alaabta sida waafaqsan caaryada soo noqnoqda si aad u dhalaaliso caagga iyo caagga.Kaarka caagga ah iyo warqadda ama kaarka warqadda iyo kaarka warqadda xiriir caag ah.Kaararka warqadaha dhalaalay waxaa badanaa lagu dahaadhay polyetylen ama APET habka baakaynta iyo daabacaadda.Xabagta PETG waxay dhalaalisaa saamaynta mashiinka soo noqnoqda sare.
1. Mashiinkan la leexan karo wuxuu leeyahay afar saldhig, isticmaal wakhti si aad u dejiso wakhtiga wareegga beddelka.Hawl-wadeenka dhabta ahi waxa uu saaran yahay mishiinka si uu u shaqeeyo, awoodiisa wax-soo-saarna waxa lagu gaadhi karaa mashiin laba saldhig oo dhaqameed.Laba saldhig ayaa riixaya mashiinka goynta tuubada tooska ah.Afar jeer mashiinnada gacanta ee saddexda goobood.Sababtoo ah meelaynta saxda ah ee tusaha iyo habaynta qoto dheer ee qaababka bidix iyo midig, tayada alxanka korantada ayaa wanaajisay isku halaynta farsamada gacanta.
2. Isticmaal software nidaamka shoogga sida isha garoonka electrostatic si loo hagaajiyo isku halaynta ee software nidaamka shoogga guud ee suuqa iibka iyo in la yareeyo itimaalka dabka.
3. Si loo yareeyo suurtagalnimada shilalka dabka sababtoo ah dhibaatooyinka dhabta ah ee hawlgalka, waxaan isticmaalnaa qalabka ilaalinta dabka si loo ilaaliyo caaryada.
4.3-6 saldhigyada waa la habeyn karaa, si toos ah u kontoroolka alaabta, badbaadinta raasamaal aadanaha, hagaajinta awoodda wax soo saarka, iyo horumarinta wax soo saarka.
1. Quudinta 1: Hawl-wadeenku waxa uu finan ka geliyaa caaryada;jaantusku wuxuu u wareegayaa hal saldhig (90 darajo);
2. Quudinta 2: Hawlwadeenku waxa uu saarayaa kaarka warqadda finan;jaantusku wuxuu u wareegayaa hal saldhig (90 darajo);
3. Mashiinka isdaba-joogga sare ee alxanka: hoos u dhigista sare ee madaxa-cadaadiska xiisadda-alxanka-kordhinta cadaadiska-qaboojinta tijaabada-kor u qaadista sare ee madaxa-soo-rogid-rogista hal saldhig (90 darajo);
4. Xarunta diyaarinta walxaha: cududda farsamada si buuxda otomaatig ah koob nuugid oo awood leh, ka saar baakadaha la dhammeeyey;rodol ku wareeg hal saldhig (90 darajo), geli walxaha 1
Qayb ka mid ah bandhigga:
Maalmahan, habka wax lagu duubo ee ka kooban kaarka warqadda iyo balaastigga xumbo caag ah ayaa la odhan karaa waa meel kulul oo baakadaha caagga ah, taas oo si gaar ah ugu habboon horumarka horumarinta shirkadaha cabbirka.Soo dejinta tooska ah, dejinta iyo maaraynta mashiinnada iyo qalabka, badbaadinta xoogga shaqada iyo dayactirka dhabta ah;Shaashashooyinka taabashada PLC waxay la shaqeeyaan nidaamka xakamaynta, digniinta digniinta cilladaha caadiga ah ee tooska ah, koodka cilladaha caadiga ah, iyo dayactirka habboon